က Round သဲသောင်ပြင်သုတ်ပဝါ s ကိုရောင်းချရန်
ပနျးပှားကိုတို့နှင့်အတူ item အားမိုက်ခရိုပတ်ပတ်လည်သုတ်ပဝါအဆိုပါပနျးပှားကိုတို့ပနျးပှားကိုတို့အရှည်အပါအဝင်မဟုတ်က Round အချင်း 150cm ပုံဖော်: 6cm ပစ္စည်းတပ်: 100% polyester; သို့ပြန်သွားရန်: 80% polyester & 20% poliamide အလေးချိန်သဲသောင်ပြင်သုတ်ပဝါ: 310GSM; ပနျးပှားကိုတို့: 233GSM; ကိုလက်စသတ်ထုတ်ကုန်: 800g / pc; Pkg ပို့ကုန်စက္ဏူထူသည်သင်၏ရွေးချယ်ရေးအခမဲ့ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်အမျိုးမျိုးသောဒီဇိုင်းဒီဇိုင်းရေးဆွဲ; သို့မဟုတ်သင့်အနုပညာလက်ရာများသည်နှင့်အညီ
Size: 150cm ပစ္စည်း: ချည်အရောင်: multicolor အထုပ် opp အိတ်အမည်: ကမ်းခြေမှာသုတ်ပဝါနမူနာအချိန်: ယေဘုယျအားဖြင့် (ကလည်းအမှန်တကယ်ထုတ်ကုန်အပေါ်မူတည်ပါသည်။ ) 3-5days ငွေပေးချေမှုရမည့်: L ကို A / C, T / T, Western Union, Money Gram, စသည်တို့ကိုအချိန် ဖြန့်ဝေ၏: သင်၏အရေအတွက်နှင့်အထူးတောင်းဆိုချက်အရနှုန်းအဖြစ် 10-25days ။ MOQ: ရေကြောင်း၏ 100pcs အမျိုးအစား: ပင်လယ်, လေသို့မဟုတ် Express ကိုအားဖြင့်
က Round ပနျးပှားကိုတို့သဲသောင်ပြင်သုတ်ပဝါရောင်းချ
ချည်ခင်အရေအတွက်ရရှိနိုင်သော 16 တိုက်လေယာဉ် 21s 21s /232s /2Size ကိုရရှိနိုင်မျက်နှာသုတ်ပဝါ 30x30cm / 33x33cm 35x35cm / 40x40cm လက်သုတ်ပဝါ 35x70cm / 40x70cm 45x70cm / 45x80cm ရေသုတ်ပုဝါ 70x140cm / 75x145cm 75x150cm / 76x152cm BathSheet 80x160cm / 90x155cm 90x180cm / 100x150cm ရေကူးကန်သုတ်ပဝါ 70x140cm / 75x150cm 76x152cm / သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်းရရှိနိုင်သောအပို Package ကိုရရှိနိုင် 80x160cm သဲသောင်ပြင်သုတ်ပဝါ 70x140cm / 75x150cm 76x152cm / 80x160cm 90x180cm / 100x150cm အလေးချိန်ရရှိနိုင် 300GSM-400GSM
ပစ္စည်းကို 100% ဝါဂွမ်းသို့မဟုတ် polyester အရွယ်အစားရွေးချယ်မှုပုံမှန်အရွယ်အစား 28 "x58" အတွက်အပြည့်အဝအရွယ်အစား, 30, "x60", 40 "x70" သို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက် Grammage 280 ~ 600gsm သင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုစောင့်ရှောက်ညွှန်ကြားချက်စက်ရေချိုးနိုင်သောယာဉ်ရှိသူများအတွက်ပုံနှိပ်ခြင်းအဘို့အပုံမှန်ထက်အလေးချိန်ဖြစ်ပါသည်
ဤသည်အားမိုက်ခရို Shin & Grid သုတ်ပဝါ, ပျော့ပျောင်းသောလက်ခံစားချက်, ကောင်းသော absorption.Very တောက်ပပုံပန်းသဏ္ဌာန်, ငါတို့သည် surface.The သုတ်ပဝါပေါ်တည်ငြိမ်ဇယားကွက်ထည့်နိုင်သည်လှပသော Terry ရှိပြီး sleek.we က shinning ဒါမှမဟုတ် surface.Use အပေါ် Grid နှင့်အတူ shinning စေနိုင်သည်ခံစားရ က damp သို့မဟုတ်ခြောက်သွေ့တဲ့လျင်မြန်စွာရေ, မြေမှုန့်, အမဲဆီဖယ်ရှားပစ်ရန်နှင့် completely.Lint အခမဲ့, မကျန်သဲလွန်စ။ ဖွဲ့စည်းမှု: ဖောက်သည်အလေးချိန်အကွာအဝေး၏အမိန့်ဖြင့် * 30CM 30, * 40CM 40, 40 * 60CM /: 100% အားမိုက်ခရိုပုံမှန်အရွယ်အစား 240gsm-400gsm အသုံးပြုမှု: အိမ်သူအိမ်သားသန့်ရှင်းရေးဘို့, ပရိဘောဂ, စားပွဲ, အိမ်သုံးပစ္စည်းနှင့်အသေးစားပစ္စည်းကိရိယာများသုတ်ရန်။ Qingdao ဟေ့နေ့စဉ်တုန်းသတ်ဖြတ်ခြင်းကုန်ပစ္စည်းများ CO, Ltd မှ ကျေးဇူးပြု. စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ငါ့ကို: ကနေ။
မိုက်ခရိုစူပါ Chenille ကြမ်းတိုက်အဝတ်စုတ်ကမ်းလှမ်းချက်ရောင်းချ
မိုက်ခရိုစူပါ Chenille ကြမ်းတိုက်အဝတ်စုတ်အကျင့်ကိုကျင့်သန့်ရှင်းရေးအတှကျအလယ်မှာ 100% အားမိုက်ခရို, မိုက်ခရို Chenille အထည်အလိပ်၏ဖန်ဆင်းထားသည်က superest အားမိုက်ခရိုသန့်ရှင်းရေးထည်ဖြစ်ပါတယ်။ သင် floor.This ကြမ်းတိုက်အဝတ်စုတ်သန့်ရှင်းရေးဖို့ Chenille ကိုသုံးပါ, တစ်ဦးကြမ်းတိုက်အဝတ်စုတ်လက်ကိုင်ပေါ်ကြမ်းတိုက်အဝတ်စုတ်ပထမဦးဆုံးအစွဲစေနိုင်ပါတယ်စုံလင်သောဒီဇိုင်းရှိသည်, ယင်းအားမိုက်ခရိုထည်မာပလပ်စတစ်ကြမ်းတိုက်အဝတ်စုတ်ခေါင်းကိုခြုံ, အကြမ်းတိုက်အဝတ်စုတ်ခေါင်းကိုသင့်ရဲ့ပရိဘောဂ damadge ဒါမှမဟုတ်သစ်သားကြမ်းပြင် lacerate cann't ။ soft ထုတ်ကုန်, ကောင်းသောစုပ်ယူမှု, တာရှည်ခံ, ရှာဖွေနေကောင်းသော, သန့်ရှင်းသောရေကို drop, ဖုန်မှုန့်သို့မဟုတ်အညစျအကွေးမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ completely.Lint အခမဲ့, သန့်ရှင်းရေးအပြီးထွက်ခွာသွားခြင်းမရှိပါသဲလွန်စအလွယ်တကူခြောက်သွေ့သည်နီးသန့်စင်စေနိုင်ပါတယ်။ ကွဲပြားခြားနားသောအာကာသအကြား Cross-ညစ်ညမ်းမှုကိုရှောင်ပါ။ အပြည့်အဝ Size: ကိုလည်း မှစ. မျက်နှာကြက်သို့မဟုတ်ကြီးမားသောချောမွေ့ဧရိယာရှင်းလင်းနိုင်သည်, clean သို့မဟုတ်အရောင်သစ်သားကြမ်းပြင်, tile ကိုကြမ်းပြင်, ကြွေပြားမြို့ရိုးကိုမျက်နှာပြင်နှင့်စကျင်ကျောက်မျက်နှာပြင်မှ: 38 * 30CM, အ chenille width ကို 18CM ဖြစ်ပါသည်, ကျနော်တို့ထုံးစံကဒီထုတ်ကုန်များအတွက်အရွယ်အစား, အသုံးပြုမှုလုပျနိုငျ hlcleansing.com မှာလက်သုတ်ပုဝါ: ။ နေဖြင့် Qingdao ဟေ့နေ့စဉ်တုန်းသတ်ဖြတ်ခြင်းကုန်ပစ္စည်းများ CO, Ltd မှ ကျေးဇူးပြု. စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ငါ့ကို